Zulu - SAFE PLANS FOR ESCAPE | finexhouse
- IZINDLELA ZOKUPHEPHA KWE-ESCAPE -
"Isu sokuphepha yisisulu ngasinye esihlukumezekile 'esicacile ukunciphisa izingozi ezivezwe udlame lomlingani wakhe futhi ukulawula .... Lena kuphela isifinyezo esifushane .... Uhlaselwe isisulu sibhekene nesethi eyodwa yezingozi uma ehlala ebuhlotsheni kanye nezinye izingozi uma ehamba .... Izinhlelo zokuphepha azibhalwa ngamatshe. Kuzohlale kulungiswa. "-1
Zonke izisulu ezihlukumezekile zisengozini enkulu uma zikhona ushiye i-batterer. QAPHELA!
1. "Ukuhlela Ukuphepha" ngu-Attorney Jill Davies we-Greater Hartford Legal Assistance 1997
Uma umhlukumezi wakho engekho ngaso sonke isikhathi, futhi umhlukumezi akasoli lutho, kunezinyathelo eziningana ongazithatha ukuze uzilungiselele ukuphunyuka kwakho.
1. Ungavumeli umhlukumezi wakho azi ngezinhlelo zakho zokubalekela. Qaphela ukuba ungashiyi noma yiziphi izinkomba mayelana nokuthi uphi. Ungenzi izingcingo ezide kude kusukela izinombolo zizovela kubhilikithi ngemuva kokuthi ushiye futhi umshayeli angakwazi ukukulandelela. Uma umuntu ekubiza, ubuye ubatshele ukuthi awufuni ukuthi bakhulume ne-batterer. Kungcono ukuthi unganiki inombolo yakho yocingo kubaqeqeshi abangase bangaqapheli ingozi yakho. Futhi umqhubi angasebenzisa ucingo * 69 ukuze athole ukuthi ubani obizwa ngokuthi. Uma umhlukumezi une "ID yocingo" kuqapha okukhethekile okudingeka kuthathwe.
2. Shayela u-411 bese ubatshela ukuthi uyisisulu esithintekayo. Bayokunika izinombolo zocingo zezikhungo zokuhlaselwa izisulu. Uma unabantwana futhi ungeke ukwazi ukufinyelela esiphephelweni sokuhlushwa, yiya eMnyangweni Wokusiza Ngesigodi (DTA) bese ubacela usizo ukuthola indawo yokukhosela. Uma lezo zindawo zokuhlala zigcwele, i-DTA izokubeka ehhotela eliphuthumayo. Uma ungenayo izingane futhi unenkinga yokungena endaweni yokukhosela ehlushwa, ungase uhambe okwesikhashana endaweni yokuhlala
3. Cabanga ngomngane okwazi ukugcina imfihlo futhi angeke atshele umshayeli. Nika lo mngani izinto ezibalulekile ezifana nalezi: okhiye bemoto eyengeziwe; amakhophi amadokhumenti abalulekile; imithi eyengeziwe; amakhadi esikweletu; amakhadi aluhlaza; ukubhaliswa kwemoto; ama-passports; amaphepha okugcina; imfihlo PO Box keys; kanye nanoma yini enye engasetshenziselwa ukwandisa ukuzimela kwakho. Qiniseka ukuthi amakhadi esikweletu ngeke akhokhiswe futhi athunyelwe ekhelini lomhlukumezi ngoba umhlukumezi angakuthola umzila kuwe. Futhi phakamisa izikhwama ezimbalwa zezinye izinto ocabanga ukuthi zizosiza kuze kube yilapho ungaba nesikhathi sokubuyela ekhaya lakho ne-escort yamaphoyisa.
4. Yakha amagama amakhodi okufanele asetshenziswe nezingane uma udinga ... ukubiza amaphoyisa noma ukugijima endlini yomakhelwane.
5. Uma unesikhathi, yenza umzimba wakho uqine ngaphandle kokuba umhlukumezi azi ngakho. ngokuzigcwalisa ngempilo emihle eqinisekisa imibono nemicabango.
6. Uyazi ukuthi i-batterer ihle kunanoma ubani. Ngakho-ke, uyazi ukuthi ukuphunyuka kwakho kuzoba yini okuphumelelayo. Kungakhathaliseki ukuthi ungathini, ungatshele umbhedeli futhi ungavumeli umqhubi ukuba athole le ncwadi yesandla noma abone le webhusayithi ngoba kuyoba nzima kakhulu esikhathini esizayo uma usulungele ukuhamba. Uma ukhubazekile, amalungiselelo okukukhetha angasetshenziswa uma ungenakuhlangana endaweni ekhethiwe ukuba ubalekele. Ungalahli ithemba! Ukuzibona wena nabantwana bakho kubaluleke kakhulu, njengezitifiketi zokuzalwa, ikhadi lokuphepha lomphakathi, isitifiketi somshado, ama-oda okuvimbela endala, ukubhaliswa kwamavoti noma ilayisensi yokushayela. Thatha amarekhodi wezezimali, njengamaresidi erenti, isihloko sezimoto, njll Ungavumeli umhlukumezi wakho ukuthi uyaziqoqa. Kungcono ukuqoqa amadokhumenti abalulekile uma umhlukumezi engekho ekhaya. Fihla endaweni ephephile. Izakhiwo zokugcina izinto zithengiswa futhi zivame ukusetshenziselwa ukugcina izinto ezifihlekile lapho izisulu ezihlukumezekile zikhona esimweni sokuguquguquka sokuphila. Futhi, qinisekisa ukuthi umthethosivivinywa awuhambi emzini womhlukumezi. Ingabe ithumele ku-PO Box yakho noma kumakhaya wabangani.
8. Thatha izingubo eziqinile, zansuku zonke kuwe nabantwana bakho. Ungathathi okuningi. Ungathola okunye kamuva. Paka ngaphezulu, imithi, kanye nesethi eyengeziwe yezihluthulelo endlini nasemotweni. Ungase ufune ukupakisha kusengaphambili futhi ugcine isikhwama endlini yomngani.
9. Thatha okuthile okhethekile noma okunenjongo kumntanakho, njengedoli, ithoyizi noma incwadi. Kukhona amathoyizi amasha okuthola lapho uphephile futhi uhlala impilo yakho entsha.
10. Shiya umhlukumezi inothi ethi uya endaweni yokuqokwa kukadokotela noma ngabe yikuphi okungeke kuvuse ukusola. Lokhu kuzokunika ukuqala kwekhanda elikhulu kunokwenzeka.
11. Ungakhohlwa, uma udinga ukuxhumana noNoma ubani owazi umhlukumezi wakho, qaphela ukuthi indawo yakho ayikwazi ukulandelwa nge-GPS yakho noma efonini elikude, i-ID yocingo, * 69 * 57 noma * 59. NOMA i-imeyili. Noma susa yonke imilayezo "ethunyelwe" evela "ebhokisini eliphumayo" leposi ethunyelwe kukhompyutha yakho. Susa wonke amafayela owahudula kuwo ebhukheni likadoti. ISIQONDO SONKE AMALUNGA AKHO NGOKUPHAKATHI UKUHLELA UKUPHATHA OKUPHAKATHI.
Uma une-Personal Care Attendant
Uma le PCA ingeyona umhlukumezi, ungacela i-PCA usizo. I-PCA ingabiza amaphoyisa noma enye ye-ejensi efinyelelekayo ku uhlu lwemithombo uma bekude nomhlukumezi. Kodwa-ke, uma umhlukumezi ekhokhela isikhonzi sakho sokunakekelwa noma uma umhlukumezi nobungane ne-PCA musa ukutshela i-PCA noma yini.
* Ukuvakashelwa kwezokwelapha kuhlinzeka ngamathuba amahle okubaleka. Uma ungavakashele njalo udokotela, kungase kudingeke wenze sengathi uyagula ukuze uthole esibhedlela. Uma umhlukumezi ehamba nawe esibhedlela noma ekuvakasheni kukadokotela futhi angeke akushiye yedwa, cela udokotela ukuba amshiye ekamelweni. Yazisa udokotela ngasese ukuthi uphathwa kabi futhi udinga ukuthola indawo yokukhosela ephephile.
* Odokotela abaningi bazoxhumana nesisebenzi sezenhlalakahle esibhedlela, okuzokusiza ukuba uthole indawo yokuhlala futhi unikeze i-voucher yekhishi yokuhamba. Wena noma udokotela ungase futhi ubize i-FINEX House ngokuqondile. Uma usuqedile ukubalekela esimweni esihlukumezayo, noma ngokuhlela ukuphunyuka noma ngokubiza amaphoyisa ukuthi angenele ngesikhathi sokuhlukunyezwa, kubalulekile ukuthola indawo yokuhlala ephephile wena kanye nendawo yakho izingane.
* EMassachusetts, kunenethiwekhi yezikhungo zokuhlala eziphuthumayo nezindlu eziphephile izisulu ezihlaselwe kanye nezingane zabo. Isilinganiso Ubude bokuhlala endaweni yokukhosela kungamaviki ayisithupha kuya kwangu-8. Ikheli lakho lihlala lingaziwa futhi lendawo yokuhlala, izisebenzi ezivame ukuhlaselwa, zizokusiza wena nezingane zakho ukuba ululame ekuhluphekeni owake wahlangabezana nazo. Izindlu zokuhlala ezihlaselwe izisulu zinikeza ukululekwa, ukungenelela kwezinkinga, ukwesekwa ngengozi, ukunakekelwa kwezingane, ukuvikela umthetho, kanye nokuthola indawo yokuhlala, imisebenzi kanye / noma izinzuzo ezihlala njalo. Uma udinga isikhathi esiningi ukubeka impilo yakho ngokuhlelekile, ungathunyelwa ohlelweni lokuphila esiphuthumayo kusuka endaweni yokuphuthumayo noma ekhaya eliphephile. Izinhlelo zokuphila zesikhashana zindawo zokuhlala kweqembu lapho izisulu zangaphambili zihlaselwe khona kanye nezingane zabo zingahlala unyaka owodwa.
ISIQONDO SONKE AMALUNGA AKHO NGOKUPHAKATHI UKUHLELA UKUPHATHA OKUPHAKATHI.
1.Divorce Basics for Pro Bono Attorneys Project Volunteer Lawyers October Okthoba 1997 "Ukukhomba Umyeni Ohlukumezayo eNkantolo: Wena ube uMahluleli" Adams Co-Founder of Emerge (Uhlelo Batterers)